Modely fifanarahana fototra ho an'ny mpamorona sary | Famoronana an-tserasera
Mpandraharaha telo miasa miaraka amina antontan-taratasy any amin'ny birao
Ny fifanarahana asa dia antontan-taratasy tena manan-danja tokoa satria izy no mametraka ireo andininy ireo ary koa ny fepetra hanatanterahana asa ary miaraka amin'ny karama inona. Raha anisan'ny mpiasa ao amin'ny sehatray ianao dia tena hahaliana sy mahasoa anao ny hanana referansa mazava momba an'ity rakitra ity.
Ity misy maodely iray izay mampiseho taratra tsara ny fomba fananganana an'io antontan-taratasy io sy izay data tokony hiseho ao. Izy io dia maodely manokana izay hataon'ny mpandraharaha amin'ny mpamorona endrika famoronana endrika iray na maromaro mifanaraka amin'ny toetra sasany. Ity fifandraisana ara-dalàna ity dia mifanaraka amin'ny fampanofana na fanomezana tolotra.
1. Ny fanaovan-tsonia ity fifanekena ity, ary ny fiverenany any amin'ny Mpamorona, dia midika fa ekena izy io ary hampiseho ny baiko hanombohana ny volavola nifanarahana. Noho izany, ny fanafoanana ny baiko manaraka hanatanterahana ny Volavola nifanarahana dia mitaky fandoavana ny habetsaky ny asa tanterahina mandra-pahatongan'ny daty fanafoanana.
2. Ny Mpamorona dia manatanteraka ny volavola nifanarahana tamin'ny Mpanjifa, mifanaraka amin'ny voalazan'ity fifanarahana ity, ary manolotra azy ao anatin'ny fe-potoana nifanarahana, manomboka amin'ny fahazoana ny fampahalalana sy ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin'ny fanatanterahana ilay endrika voalaza etsy ambony.
3. Ny Client dia mandray anjara amin'ny fanomezana amin'ny fotoana rehetra ny fampahalalana sy ny antontan-taratasy nangatahan'ny Designer ho fampandrosoana mahomby ny Drafitra ary manome alalana […] miaraka amin'ny DNI / NIF […], ka amin'ny anarany sy amin'ny anarany, manamora ny fampahalalana ilaina na ny antontan-taratasy ilaina ary omeo ny torolalana izay heverinao fa mety amin'ny Mpamolavola mba hanatanterahana ny Volavola.
4. Ny teti-bola ampiarahina amin'ity fifanarahana ity dia manan-kery mandritra ny […] volana manomboka amin'ny fifandraisany amin'ny Mpanjifa. Raha vantany vao lasa io fe-potoana io noho ny antony tsy voafehin'ny Mpamorona, na omen'ny mpanjifa azy, ny Mpamorona dia afaka mandinika ny tetibola, manao teti-bola vaovao, izay hanampy ny fiakarana mety hitranga, fa mitazona ny masonkarena fanombanana mitovy amin'ny teti-bola voalohany. Raha toa ka tsy manaiky ny teti-bola vaovao ny Mpanjifa dia afaka manafoana ny fifanarahana ny Mpanamboatra ary adidy handoa ny volan'ny mpanjifa ny mpanjifa ary ny asa tanterahina amin'izany fotoana izany dia nampiakatra ny sandany amin'ny 10 %.
5. Ity teti-bola ity dia tsy misy asa fanampiny mety hitranga avy amin'ny fanovana ny orientation amin'ny fanomanana azy ireo. Vokatr'izany, ny fiovana rehetra amin'ny atin'ny baiko ity dia mety hidika hoe famerenana ny tetibola avy amin'ny Mpamolavola, ka manamboatra iray vaovao izay hanampiany ny fiakarana amin'ny vola efa nitranga na azo novokarina, saingy mitazona ireo masontsivana ireo ihany . nampiasaina tamin'ny tombana voalohany. Raha tsy manaiky ny tombam-bidy vaovao ny mpanjifa dia mety hampitsahatra ny fifanarahana ny Mpanamboatra ary tsy maintsy mandoa ny fandaniana rehetra aloan'ny Mpamolavola miampy ny asa tanterahina mandrapahatongan'izany ny mpanjifa, mampitombo ny farany 10%.
6. Raha misy antony mihoatra ny fifehezan'ny Designer dia tsy azo atao ny manohy ny Design, hofoanana ity fifanarahana ity, ary ny Client dia handray vola handoavana ny vola lany ary ny habetsaky ny asa tanterahina mandraka io fotoana io. Raha toa ka tsy azo atao ny manohy dia noho ny antony ateraky ny Mpamorona azy, dia hatsahatra koa ny fifanarahana, ary manaiky koa ny Mpanjifa handoa ny vola lany ary ny habetsaky ny asa notanterahina tamin'izany fotoana izany fa misy fihenan'ny ny vola farany an'ny 10%.
7. Ny Mpamorona dia mandray andraikitra tsy hanome karazana fampahalalana ho an'ny antoko fahatelo momba ny Drafitra, afa-tsy ny fampahalalana izay tokony omen'ny Mpamolavola an'ireo mpiara-miasa aminy. Etsy ankilany, ny Client dia mandray andraikitra hitazona ny tsiambaratelo ary tsy hanome ny antoko fahatelo karazana fampahalalana momba ny Volavola, mandra-pahafaly tanteraka ny vidiny nifanarahana.
8. Raha tsy nifanarahana an-tsoratra hafa izy, ny Designer dia mitazona ny fananan'ny indostrian'ny Designs vita, manokana ny zon'ny fitrandrahana, fa tsy ny tompony, ny Designs izay nataony teo ambanin'ity Fifanarahana ity amin'ny fe-potoana dimy (5 ) taona maro taorian'ny fandefasana ny saripika sy ny tany am-boalohany ny Famolavolana, mitaky ny famindrana amin'ny antoko fahatelo ny zon'ny fanararaotana ny fanekena voasoratra mialoha ny Mpamolavola.
9. Ny mpanjifa dia mandray andraikitra hiara-miasa faran'izay betsaka amin'ny Mpamorona mba hahazoana antoka fa hajaina ny fananana ara-tsaina voatanisa amin'ny Famolavolana.
10. Ny anaran'ny Mpamorona dia tsy maintsy miseho amin'ny toerana malaza sy manintona, amin'ny karazana fampiroboroboana sy fanohanan'ny endrika. Amin'io lafiny io, ny Designer dia hanome ny mpanjifa ny fitaovana ilaina rehetra hamantarana azy ho mpanoratra ny asa hiseho.
11. Raha tsy nifanarahana tamin'ny fomba hafa ny soratra, ny kisarisary sy ny niavian'ny Design dia fananan'ny Mpamorona ary haverina indray mandeha ampiasaina amin'ny zavatra noforonina. Ireo sketsa sy tany am-boalohany izay tsy eken'ny Mpanjifa dia haverina amin'ny Mpamorona, ny Mpanjifa mihevitra ny fandaniana azo avy amin'ny fampisehoan'izy ireo.
12. Ny Drafitra natolotra ary izay tsy eken'ny Mpanjifa, dia mitaky ny famelana ny zon'olombelona mety hotazonina eo ambonin'izy ireo, mijanona eo am-pelatanan'ny Mpamolavola, izay ny mpanoratra azy ireo, izay afaka manome izany ny asa tadiaviny na noforoniny. mety kokoa.
13. Ny mpanjifa dia mandray andraikitra hitsabo ny Volavola nomanin'ny Mpamolavola, na ny volavola na ny farany, amin'ny fanajana rehetra, manery ny tenany tsy hanapotika na hanimba azy io, ary raha izany dia tsy maintsy hamaly ny fahavoazana mety hitranga izy mahatonga ny Mpamorona.
14. Ny Client dia manaiky ny adidy handinika ny Drafitra alohan'ny hanombohana ny fizotrany amin'ny famokarana, ny fampiasana azy, ny fanaparitahana na ny fanontana azy, ary mamoaka ny Mpamorona amin'ny andraikitra na hadisoana na lesoka mety hitranga ao amin'ny Famolavolana ary tsy izany no tanjona momba ny fangatahana alohan'ny dingana voalaza etsy ambony.
15. Ity teti-bola ity dia tsy misy haba na hetra nalaina tamin'ity asa ity, izay na izany na tsy izany dia homen'ny Mpanjifa.
16. Ny Designer dia afaka mitazona farafahakeliny kopia efatra (4) amin'ny Drafitra natolotra ny Mpanjifa maimaimpoana ary afaka mampiasa azy ireo ho fampirantiana, dokambarotra na fampiroboroboana manokana, raha tsy misy fifandraisana mialoha amin'ny Mpanjifa.
17. Ireo mpana sonia dia manolotra, ho an'ny raharaham-pitsarana rehetra mety hitranga avy amin'ity fifanarahana ity, hatrany amin'ny fahefan'ny Fitsarana sy ny tribonaly ao an-tanànan'ny […], mamela mazava ny fahefany manokana raha manana izany izy ireo.
18. Fepetra fandoavam-bola: Ny mpanjifa dia mandray andraikitra handoa ny sarany ho an'ity asa ity amin'ny faran'ny iray (na teo aloha raha nifanarahana) araka ireto fepetra manaraka ireto:  Cash  Famindrana banky ([…] fihenam-bidy%). Ho porofon'ny fanekena ity fifanarahana ity, ny mpamatsy vola dia manasonia, amin'ny toerana sy amin'ny daty voatondro ao amin'ny tetibola. Ny mpanjifa  Ny mpamorona  Hizaha  Amin'ny faran'ny asa  Nahemotra amin'ny […] andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Fifanarahana modely fototra ho an'ny mpamorona sary
Karen dia hoy izy:
Valiny tamin'i Karen
XongoLab dia hoy izy:
Fampahalalana mahatalanjona. Misaotra tamin'ny fandefasana.
Mamaly an'i XongoLab
+30 Illusion illusion izay hahatonga anao hisalasala ny amin'izay hitanao rehetra